Geli qoraalka sawirka: Cashar ku saabsan sida qoraalka sawirka loo geliyo | Hal-abuurka Online
Geli qoraalka sawirka
Mar kasta oo ay jiraan nashqado iyo nashqado badan oo naqshadeeya boodhadhka ama xayaysiisyada ay qoraalka iyo muuqaalku noqdaan hal-doorka goobta. La yaab maaha in ay yihiin laba qaybood oo garaaf ah oo aad ugu dhex jira qaybta oo aan weligood la dareemin meel kasta oo ay tageen.
Maqaalkan, waxaan u nimid inaan ku barno farsamo cusub oo kaa caawin doonta inaad sii waddo naqshadaynta mashaariicda xiisaha., halkaas oo aad ka heli karto aqoon cusub oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee garaafyada ee ka jira adduunka naqshadeynta garaafyada iyo dhinacyo kala duwan.
1 Qaabka .TXT
2 Geli qoraalka sawirka
3 Qalabka kale ee habkan
3.2 Tafatiraha Shutterstock
3.3 iStock Publisher
Kahor intaanan ku soo bandhigin waxa noqon doona mawduuca qoraalka iyo casharrada, waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato qaabkan kale ee aan kuu soo bandhigi doono inta lagu jiro qaybtan.
Marka hore waa in lagu daraa in qaabkani yahay qaab la mid ah kuwa kale balse uu leeyahay astaamo kala duwan. Faylasha leh kordhinta faylka .txt waxa kaliya oo lagu bilaabi karaa codsiyada qaarkood. Faylasha Txt waxay noqon karaan faylasha xogta halkii ay ka ahaan lahaayeen dukumeenti ama warbaahin, taas oo macnaheedu yahay inaan loogu talagalin in la arko gabi ahaanba.
Dukumeenti qoraal ah oo cad oo lagu kaydiyay qaabka TXT waa la abuuri karaa, la furi karaa, lana tafatiran karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijyo habayn erayo kala duwan oo aad u kala duwan iyo qoraalada tafatirka loogu sameeyay nidaamyada Linux, kombiyuutarada iyo aaladaha Microsoft Mac-ku-saleysan ee Windows.
Waxa ku jira .txt faylalka qoraalka ASCII ee cad waa in loo kaydin karo dukumeenti .txt ee faylalka cabbirka la dhimay. Ku dhawaad ​​dhammaan taleefannada casriga ah waxaa lagu soo daray codsiyada bixiya caawinta ku habboonaanta si loo galo waxa ku jira faylalka TXT, halka Qalabka Amazon Kindle ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu furo oo arag waxa ku kaydsan dukumeenti qoraal ah.
Codsiyada tafatirka qoraalka ee ugu caansan Microsoft Windows sida Microsoft Notepad ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo faylasha TXT, barnaamijkan ayaa xitaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo dukumeentiyada qoraalka ah ee qaababka HTML iyo JS iyo kuwa kale.
Daahfurka faylka .txt ama fayl kasta oo kale ee kombayutarkaaga, waxay ku bilaabataa adigoo laba jeer gujinaya. Haddii ururada faylkaaga si sax ah loo habeeyey, codsiga raba in lagu furo faylka qaabkan ayaa furmi doona. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad soo dejiso ama iibsato arjiga saxda ah si aad u gasho faylka .txt.
Marka aad wax badan ka ogaato faylkan, waxaanu ku tusi doonaa siyaalo jira si aad qoraal u geliso sawirka. Waxaa jira dhowr siyaabood, oo dhamaantood aad u kala duwan oo kala duwan, laakiin waxaan ku tusineynaa midka ugu fudud.
Sidaan horey u soo sheegnay, waxaan ku tusi doonaa ikhtiyaarka ugu fudud. Tani waa lagama maarmaan in laga sameeyo Microsoft.
Xafiiska Microsoft, isticmaal WordArt ama sanduuqa qoraalka si aad qoraal ugu darto sawirka korkiisa. Waxaad ku dhaqaajin kartaa sanduuqa qoraalka ama WordArt sawirka ka dibna, iyadoo ku xidhan barnaamijka Microsoft Office ee aad isticmaalayso, u beddel qoraalka si aad ugu habboonaato sawirka.
Doorashada kale ee qoraalka lagu daro sawirka korkiisa waa in la sawiro sanduuqa qoraalka, ku qor qoraalka aad rabto sanduuqa qoraalka, ka dibna ka dhig asalka iyo dulucda sanduuqa qoraalka mid hufan. Waxaad u qaabayn kartaa qoraalka sanduuqa qoraalka, si la mid ah habka aad u qaabayso qoraalka meel kasta oo ka mid ah Xafiiska. Doorashadani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay markaad rabto inaad ku darto wax ka badan hal ama laba sawirkaaga.
Qalabka kale ee habkan
Marka xigta, waxaanu ku tusinaynaa qaar ka mid ah qalabka laga yaabo inay ku anficaan oo ku siinaya fudayd weyn markaad la shaqaynayso.
Canva wuxuu kugu hagayaa casharro taxane ah oo fudud kuwaas oo kaa dhigi doona inaad dareento sidii naqshadeeye waqti la'aan. Markaad diyaar u tahay inaad wax gaar ah ku sameyso sawirada aad heshay, habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabo waa casharrada Canva. ku saabsan calaamadaynta farta, midabka, doorashada iyo isku dhafka, oo lagu daray filtarrada sawirka, asalka, iyo qaababka. Waxa aad baran doonto ayaa kaa caawin doona inaad sawiradaada ku darsato qoraalka oo aad gaadho saamaynta la rabo.
Titan sawirada saamiyada, Shutterstock kaliya maaha maktabad weyn oo sawirada kaydka ah. Sidoo kale wuxuu bixiyaa qalab hal abuur leh oo aad u qurux badan sida Shutterstock Editor, tafatire sawir online fudud Si aad u isticmaasho taas oo samaynaysa tafatir fudud si dhakhso leh oo soo jiidasho leh.
Waxaad si toos ah uga socodsiin kartaa boggooda sawirka buug-yaraha, iyo sidoo kale boggooda, hoosta qalabka tab. Waxaad la shaqayn kartaa labada sawir ee Shutterstock, xataa ka bilow horu-marinta biyaha summaysan, oo si toos ah u kaydi dhammaan tafatirka sida sawiro heer sare ah marka aad go'aansato inaad liisan siiso, iyo sidoo kale sawiradaada adiga oo isticmaalaya qaabka soo dejinta.
Ku darista qoraalka sawiradaada waa mid aad u fudud, iyo waxaad haysataa noocyo badan oo kala duwan oo ah qaababka xarfaha iyo xitaa la soo jeediyay isku darka, midabada iyo cabbirrada, oo ay ku jiraan cabbirada hore loo dejiyay ee cinwaanka, qoraal hoosaadka, iyo qoraalka. Marka lagu daro shaqo abuurka iyo dib u habeynta, filtarrada, saamaynta iyo walxaha caadada u ah, waxaad abuuri kartaa sawirro gaar ah oo indho birbiqsi ah. Ka sokow in qalabkani sidoo kale la yimaado farabadan oo habyaalo diyaar u ah in la isticmaalo.
Xigasho: Software Active
Waxaa loo arkaa wakaalada caanka ah ee sawir qaade iStock, iyo waxay siisaa macaamiisheeda tifaftirahooda sawirka khadka tooska ah si ay u shakhsiyeeyaan sawirada ururintooda dhawr dhagsi. Waxay leedahay bog u gaar ah, sidoo kale waxaad si toos ah uga raadin kartaa sawirada buug-yareheeda tafatiraha. Fadlan la soco in qalabkan loo heli karo oo keliya sawirrada iStock.
Tifaftiraha iStock waa fududahay in la isticmaalo, uma baahnid wax xirfado naqshadeyn ah si aad ula shaqeyso. Waxay ka dhigaysa mid aad u fudud in lagu daro qoraalka sawirada, isagoo ku siinaya sanduuqyo qoraal ah oo la beddeli karo oo qaabab iyo qaabab kala duwan leh, oo ay la socoto xulasho ballaaran oo far, midabyo, iyo cabbirro ah. Xulashooyinka tafatirka waxaa ka mid ah: Qaababka loo dajiyay ee caanka ah, cabbirada gaarka ah, jar-jaryada, filtarrada, calaamadaha iyo garaafyada.
Sixirka Dhabta ah ee Tafatirka Sawirka, DesignWizard waa tifaftire muuqaal online ah oo xirfad leh, oo ay soo saartay WaveBreak Media, shirkad soosaar sawir iyo muuqaal ah oo garanaysa wax kasta oo jira si ay u ogaadaan tafatirka sawirka. Qalabkeedu waxa uu bixiyaa sifooyinka tafatirka aasaasiga ah, laga bilaabo jeexid iyo wax ka beddelka filtarrada, dul-istaagga qoraalka, iyo qaababka. Xataa waxay leeyihiin muuqaal tafatirka fiidyaha. Waad iska diiwaan gelin kartaa, samayn kartaa nashqado oo kaydin kartaa, soo dejisan kartaa oo wadaagi kartaa bilaash, laakiin sidoo kale waxa ay ku siinaysaa nooc qiimo leh oo kaydin dheeraad ah iyo nuxur gaar ah leh.
Tifatiraha ka kooban habab badan iyo cabbirro hore loo diyaariyey oo loogu talagalay warbaahinta bulshada, maktabad ay ka buuxaan sawirro xirfad leh, noocyo kala duwan oo xarfo ah oo aad ka dooran karto, filtarrada iyo saamaynta aad codsan karto sawiradaada. Waxa kale oo aad geli kartaa alaabtaada wax walbana waa kuwo aad loo habeyn karo. Interface-ka isticmaaluhu waa mid aad u fudud, sidoo kale waxay leeyihiin casharro aad u wanaagsan oo kugu hagaya hawlihiisa hab hawleed.
Ku darida qoraalka sawirada waa mid aad u fudud. Waxaad dooran kartaa qaab-dhismeedka oo aad habayn kartaa qoraalka, ama waxaad isticmaali kartaa badhanka qoraalka si aad u jiiddo goobta qoraalka meesha aad rabto, sidoo kale waxaad dooran kartaa farta, cabbirka farta, midabka iyo goobaha kale ee horumarsan, iyo dhammaan wax ka yar hal daqiiqo.
Tani waa funky - far waaweyn, fikrado badan, aadna u fududahay in la isticmaalo oo aad rabto inaad qoraal ku darto sawirada mar walba. Sida Canva, BeFunky waxa ay ku siinaysaa casharo kugu dhiiri galin doona in aad isticmaasho kaliya ma aha in ay ku darto hawlaha qoraalka, laakiin sidoo kale qalabkeeda inteeda kale: lipstick, soo-gaadhista iyo qaanso-roobaadka. BeFunky waxay la hadashaa dadweynaha Sameeyaha oo wata casharro boodhadh ah oo DIY ah, fikrado farshaxanimo, iyo qaab-qoraalyo kaadhka salaanta. Waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo ilo ah halka Waxaad ku habeyn kartaa midabada, jaangooyooyinka, mugdiga iyo cabbirrada aad rabto.
Waanu macsalaamayn kari waynay qaybtan anagoo aan marka hore ku tusin qaar ka mid ah agabka shaqadaada kuu fududayn kara. Taasi waa sababta. Gelida qoraalka sawirku waa hawl fudud, xitaa maanta, waxaa jira beddelayaal si toos ah u sameeya oo si toos ah u naqshadeeya.
Sidaa darteed, haddii aad meeshan timid, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sii waddo baaritaanka iyo inaad wax badan ka barato tas-hiilaadka iyo marinnada aan heli karno. Waa markii aad naqshadayn lahayd mashaariicdaada ugu horreeya oo aad ku ciyaarto agabyada kala duwan iyo walxaha garaafyada ee aan ku siinnay.
Raadi muuqaal wanaagsan iyo cinwaan wanaagsan oo horay u soco oo samee mashruucaaga ugu horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Geli qoraalka sawirka
Sida loo gooyo sawirka goobada